သတင်း - မေဓိကာရာမ
၀၅.၁၁.၂၀၁၃ တွင် စတင်တည်ထောင်သည်။
Home သတင်း သတင်း
Posted by medhika rama at 10:22 AM0comments
သာသနာ့ အလံ နောက်ခံသမိုင်း
သာသနာ့အလံ တီထွင်သူ အမှန်
ထိုအလံတော်ကို (၁၈၈၅) ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ဗုဒ္ဓအလံတော်ကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က အသိအမှတ် ပြုလာကြသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ခန့်မျှသာ ရှိပေသေးသည်။
ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓသာသနာ့အလံတော်အဖြစ် (၁၉၅၁) ခုနှစ်သို့ ရောက်သောအခါမှသာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင်ရှိသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံများမှ လက်ခံလာခြင်းဖြစ်သည်။
အရှင်စန္ဒောဘာသ(ရွှေဘို)ရေးသားသော `သာသနာ့အလံတော်´ စာအုပ်နှင့် ဒီဝက်ဆိုက် (http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=43,4030,0,0,1,0) မှ မှီငြမ်းရေးသားပါသည်။
By D.C. Ranatunga, Sunday Times, April 29, 2007
Colombo, Sri Lanka -- In recent history, we have not heard of Vesak full moon Poya day falling in April. Vesak has always been celebrated in May. One hundred and twenty two years ago, however, in 1885 Vesak Poya fell on April 28.
<< The Buddhist flag: A blend of six colours believed to have been exhibited in the aura of the Buddha
The idea of designingaBuddhist flag was mooted by the Colombo Committee organising the Vesak celebrations and was hailed by Colonel Olcott who made the following observation in his 'Old Diary Leaves': "It was at this time that our Colombo colleagues had the happy thought of devisingaflag which would be adopted by all Buddhist nations as the universal symbol of their faith thus serving the same purpose as that of the cross does for all Christians. It wasasplendid idea and I saw inamoment its far-reaching potentialities as an agent in that scheme of Buddhist unity. Our Colombo brothers had hit upon the quite original and unique idea of blending in the flag the six colours alleged to have been exhibited in the aura of the Buddha."
Carolis Pujitha Gunawardena has been credited as the designer of the flag which appeared for the first time in the Sinhalese newspaper 'Sarasavi Sandaresa' on April 17, 1885. The design consisted of the six colours 'nila' (sapphire blue), 'pita' (golden yellow), 'lohita' (crimson), 'odata' (white), 'manjesta' (scarlet) and 'prabhashvara' (mixture of the five).
The flag took the shape ofalong streaming pennant which Colonel Olcott commented would be "quite unsuitable for carrying in processions or fixing in homes". He suggested that the flag should take the shape and size of usual national flags. The proposal was accepted. And thus was born the Buddhist flag which will be raised at Buddhist homes on Tuesday, May 1, this year's Vesak full moon Poya day.
ပိ​ဋ​က​တ် ပါဠိ အဋ္ဌ​က​ထာ ဋီကာ ဒီ​မှာ​ရှာ
သီ​ရိ​လ​င်္ကာနိုင်ငံ​ရဲ့ အြ​ကီး​ဆုံး​က​မ္ဘာ​ကိုြ​ဖ​န့်​​တဲ့ ဗု​ဒ္ဓ​ဘာသာ​စာေ​ပ စာ​အုပ်ဆို​င်
အရဏ်သ​စ် လူ​ငယ်ဖွံ့ြ​ဖိုးေ​ရး ပရဟိတေ​ဂ​ဟာ
http://medhikarama.blogspot.com/ဆိုက်ကို 05/11/2013 မှာစတင် တည်ထောင်သည်။. Powered by Blogger.
ကျောက်စိမ်းစေတီ ကျောက်သွေးတောင်၊ဆိုင်းတောင်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊မြန်မာ
The stupa made by many jade,saingtaung Village,Hpakant towship, Kachin state,MYANMAR The st...
ဓမ္မစကူး လ် (Dhamma School) လုံးခင်းမေဓိကာရာမ စာသင်တိုက် ၂၀၁၄
ဓမ္မစကူးလ် စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု မြင်ကွင်းများ ဓမ္မစကူးလ် သို့ သွားကြမယ် ...
လုံးခင်း အနီးက ဖန်းခါးဆောင် ကျောင်းတိုက်ရဲ့ ရေသိမ် အလှ ...
သာမောဖွယ် ဗန်းမောက်မြို့ ရဲ့ ဇလုံတောင်ရှုခင်း
ကချင်ရိုးရာ မနောပွဲ ၂၀၁၄ Mano festival of Kachin nation at Mazwatran village, lonkhin,Hpakant Towship,Kachin State , MYANMAR 2014
လုံးခင်းအနီး မဇွတ်ရန်မှာ ကျင်းပတဲ့ ကချင်ရိုးရာ မနောပွဲ ၂၀၁၄ Mano festival of Kachin nation at...
သီတင်းကျွတ်လ ဖားကန့်မြီု့နယ်လုံးဆိုင်ရာ ဆရာကန်တော့ပွဲ လုံးခင်း မေဓိကာရာစာသင်တိုက် ပင်မကျောင်းဆောင် အပေါ်ထပ်မှာ ပရိတ်သတ်များကို ဖျော်ဖြေနေကြတဲ့ ရှမ်းလူငယ်မောင်မယ်များတို့ရဲ့ရှမ်းရိုးရာအက ၂၀၁၄
လုံးကင်း၊တုံးမွန်းကျေးရွာ၊ကထိန် အောင်ပွဲ အမှတ်တရ
ကထိန်ပွဲမှာ အမှတ်တရ ဒေါ်စီစီစိမ်း နဲ့ မိတ်ဆွေများ ထမင်းပွဲမှာ တုန်ဖုန်းကံစမ်းမဲ ပေါက်မှာကို ပြောလျှက် ဝမ်းသာနေပုံ ဗန်းမောက်...
လုံးခင်း၊မှော်စီစာ မှော်လုပ်ကွက်ထဲက သဘာဝ အဖိုးတန် ကျောက်မြတ်ရတနာ တစ်ခုကို ကျောက်ကြည့်မီးဖြင့် အရည်အသွေး စစ်ဆေးနေပုံ
The flowers in the garden of our academy ကျောင်းဥယျာဉ်ထဲက ပန်းလေးများ
သစ်ခွပန်း သစ်ခွပန်း ...
English for the beginner elementary course (73)
Useful language a) Explaining your poster c) Asking questions The best (place for shopping/families) is ---------------- A...
ထေရဝါဒဗုဒ္ဓ္ဒဘာသာ - ရေစကြိုအရှင် ဧသိက
အဖြေမဲ့ ပုစ္ဆာ
မေတ္တာရှင်ရွှေပြည်သာနှင့် မစိုးရိမ်စာသင်သားတို့ ဓမ္မ၊...
အရှင်ဇဝန (မေတ္တာရှင်) ရွှေပြည်သာ - မြန်မာတို့၏အသက်
ဟင်းသီးဟင်းရွက် များ၏ အင်္ဂလိပ် အခေါ်အဝေါ်များ
“ပန်းပင်လေးတွေ စိုက်ကြရအောင်”အပိုင်း ( ၂ ) အရှင်သ...
မယ်စကြဝဠာ (မြန်မာ) အလှမယ် မိုးစက်ဝိုင်နှင့် ဗွီအို...
ဗုဒ္ဓဂယာ ဗုံးခွဲမှု အသေးစိတ် ဖေါ်ထုတ် လိုက်ပြီ
ဖားကန့်တွင် ကမ္ပဏီပိုင်ဧရိယာအတွင်း ကျောက်ရှာသူများ ...
ဦးရွှေအောင် - ကုသိုလ်နှင့်အကုသိုလ်
ဖားကန့် လုံးခင်း မှော်ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်း
© မေဓိကာရာမ ဆိုဒ်ကို ၀၅.၁၁.၂၀၁၃ နေ့တွင် , စတင်တည်ထောင်သည်။